Anker PowerConf C300, webcam marani-tsaina ary valiny matihanina | Vaovao momba ny gadget
Miguel Hernandez | 01/06/2021 10:00 | Nohavaozina amin'ny 27/05/2021 20:04 | General, hevitra
Fandraisana an-telefaona, fivoriana, antso an-tsary maharitra ... Mety ho tsikaritrareo fa tsy tsara araka ny nantenainareo ny webcam sy ny mikrôfônan'ny solosaina finday, indrindra fa izao karazana fifandraisana nomerika izao dia nanjary fahita tokoa. Androany izahay manome anao vahaolana mahasarika ho an'ireo aretina rehetra ireo.
Izahay dia mamakafaka ny Anker PowerConf C300 vaovao, webcam mahomby be fampiasa miaraka amin'ny fehin-kevitra FullHD, Wide Angle, ary ny fiasa Artimental Intelligence. Jereo miaraka aminay ny toetra mampiavaka an'ity fitaovana hafahafa ity ary inona ny teboka matanjaka indrindra raha oharina amin'ireo mpifaninana mivantana, ary mazava ho azy koa ireo teboka malemy.
2 Fametrahana sy rindrambaiko azo ovaina
Efa fantatsika i Anker taloha, izy io dia orinasa iray mirona amin'ny filokana amin'ny famolavolana premium sy ny fitaovana ao aminy, zavatra izay hazavain'ny fifandraisan'ny vidiny amintsika. Mikasika ny famolavolana dia manana endrika mahazatra izy io, manana tontonana afovoany izay anjakan'ny sensor eo afovoany, voahodidin'ny peratra miloko metaly izay hamakiantsika ny fahaizany. 1080p (FullHD) fakana sary miaraka amin'ny taha 60FPS. Ny lamosina dia vita amin'ny plastika matte izay manome fahatsapana kalitao sy fahatanjahana miavaka. Manana fisokafana ho an'ny tariby amin'ity ampahany aoriana ity ihany izy USB-C izay hiasa ho mpampifandray tokana.
Ny tariby USB-C dia 3m ny halavany
Ity farany dia teboka tsara satria mamela anao hanararaotra toerana bebe kokoa. Mikasika ny fanohanana dia manana fanohanana amin'ny faritra ambany izy, azo ovaina hatramin'ny 180º ary misy kofehy ho an'ny tohotra na tripod mahazatra. Manana teboka fanohanana roa hafa izy miaraka amin'ny tandavan 180º ary farany ny faritra ambony, izay misy ny fakantsary Hamela antsika hihodina azy 300º mitsivalana ary 180º hafa mitsangana. Io dia mamela ny fakantsary hamboarina hampiasaina eo ambony latabatra, amin'ny tripod na amin'ny alàlan'ny fanohananana eo an-tampon'ny monitor, izay tsy hahazoany habaka eo amin'ny efijery.
Amin'ity lafiny ity dia mahita fanampin-javatra mahaliana isika, na eo aza ny tsy fananana rafitra fanidiana hikatona ara-batana ilay solomaso tafiditra ao anaty fakantsary, Eny, Anker dia misy sarony roa miaraka amina endrika mihetsiketsika ao anaty fonosana ary satria adhesive izy ireo, azontsika apetraka izy ireo ary esorintsika amin'ny sitrapony amin'ny sensor, amin'ity fomba ity dia hahafahantsika manidy ny fakantsary ary maka antoka fa tsy manoratra antsika izy ireo, na dia mifandray amin'izany aza izy ireo. Na izany aza, manana jiro LED eo alohanay izahay izay hampitandrina anay ny amin'ny toe-javatra misy ny fakantsary.
Amin'ny ankapobeny ity Anker PowerConf C300 ity dia Plug & Play, izany no tiako holazaina fa raha tsy amin'ny alàlan'ny fampifandraisana azy amin'ny seranana fotsiny dia hiasa tsara izy io USB-C ny solosaintsika, na izany aza, miaraka amina adaptatera USB-C mankany USB-A isika ho an'ireo tranga ilaina. Ny rafi-pitsikilovana artifisialy sy ny fahaizan'ny autofocus dia tokony ho ampy isan'andro. Na izany aza, zava-dehibe ny fisian'ny rindrambaiko fanohanana, amin'ity tranga ity dia miresaka momba izany isika AnkerWork Azonao atao ny misintona maimaimpoana, ao no ahitantsika safidy maro, fa ny tena zava-dehibe dia ny mety hanavao ny rindrambaiko webcam ary hanalava ny fanohanany.
Ao amin'ity rindrambaiko ity afaka manamboatra ny zoro fijerena telo izahay 78º, 90º ary 115º, ary koa ny fisafidianana ny toetra telo hisamborana 360P sy 1080P, mandalo ny mety hanitsiana ny FPS, mampihetsika sy manafoana ny fifantohana, ny HDR ary a Fiasan'ny Anti-Flicker Tena mahaliana rehefa manazava isika amin'ny jiro LED, efa fantatrao fa amin'ireny tranga ireny dia miseho matetika ny flickers izay mety hanelingelina, zavatra izay hialantsika. Na eo aza ny zava-drehetra dia hanana maodely telo tsy miankina isika arakaraka ny filantsika izay amin'ny teôoriôma manararaotra tanteraka ny Anker PowerConf C300:
Manoro hevitra anao izahay raha nanapa-kevitra momba ity fakantsary ity ianao azo jerena ao amin'ny tranokala Anker sy Amazon, fa maika hametraka Anker Work ianao ary manararaotra manavao ny firmware an'ny fakantsary, satria ilaina ny mampihetsika sy mamono ny asan'ny HDR.
Ity Anker PowerConf C300 ity dia voamarina amin'ny fampiasana marina azy miaraka amin'ireo rindranasa toa ny Zoom, tamin'ity fomba ity dia nanapa-kevitra izahay fa izy io no ho fakan-tsary ho an'ny fampielezana ny iPhone News Podcast Avy amin'i Actualidad Gadget mandray anjara isan-kerinandro izahay ary aiza no ahafahanao mankasitraka ny hatsaran'ny sary. Toy izany koa, manana microphone roa isika izay manana fanafoanana feo mavitrika mba hisamborana mazava tsara ny feontsika sy hanafoanana ny feo ety ivelany, zavatra iray izay nahafahanay nanamarina fa tena nahagaga tokoa ny asany.
Ny fakantsary mitantana tsara amin'ny hazavana ambany satria manana rafitra fanitsiana sary ho an'ireo tranga ireo izy ireo. Tsy nahita olana tamin'ny fandidiana izahay tamin'ny macOS 10.14 mandroso, na amin'ny kinova Windows avo kokoa noho ny Windows 7.
Tsy isalasalana fa raisina ho fitaovana azo antoka ho an'ny fivorian'ny asantsika izy ity noho ny kalitaon'ny mikrôfony sy ny fahaizany manolotra antsika, raha manapa-kevitra ny hifidy amin'ny Anker PowerConf C300 ianao tsy isalasalana fa tsy ho diso ianao, hatreto, ny tsara indrindra efa nanandrana izahay. Raiso amin'ny 129 euro ao amin'ny Amazon na amin'ny tranokalany manokana.
Navoaka tamin'ny: 1 junio 2021
Fitaovana sy famolavolana avo lenta
Kalitaon'ny sary tena tsara
Feom-peo tsara sy autofocus
Rindrambaiko manatsara ny fampiasana sy ny fanohanana tsara
Tsy hita ny kitapo mitondra
Amin'ny teny anglisy ihany ny rindrambaiko
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » hevitra » Anker PowerConf C300, webcam mahomby ary valiny matihanina